Wangari Maathai oo dhimatay - BBC Somali
Wangari Maathai oo dhimatay
26 Sebtembar 2011
Image caption Wangari Maathai iyo madaxweyne Obama
Gabadhii ugu horaysay ee Afrikaan ah oo ku guulaysatay biladda nabada ee Nobel Peace Wangari Maathai ayaa dhimatay.
Wngari Maathai ayaa ahayd toddobaataniyo kow jiroo u ololaysa deegaanka iyo xaquuqda biniaadanka ayaa laga daawaynayay Cancer.
Wangari Maathai ayaa aasaastay ururka Green belt movement sanadkii 1970yadii, iyadoo dumarka ku guubaabiisay inay ka hortyagaan dhibaatooyinka geedaha la gooyo o laga dhigto dhuxusha kadibna deeganka u keena xaaluf iyo abaar.
Dhowr jeer ayaa la xiray boliiskana uu garaacay iyadoo u ololaynaysay cadaalada iyo ladagaalanka musuqmasuqa.
Horaantii sanadkan ayaa BBCda waraysi ay ka qaaday ayay ka hadashay sida kacdoonka dfalalk acarabta ay u samaynayaan adduun wanaagsan.
Kumi Naidoo oo katirsan ururka u ololeeya deegaanka ee Green Peace ayaa sheegay Wangari Maathai ay ahayd qof la hadli karta qof walba madaxda iyo dadka caadiga ah.
Dimashada Wangari Maathai ayaa waxaa ka hadlay dad badan caalamka. Madaxweynihii ugu horeeyay ee Afrika oo dumar ah madaxweynaha Liberiya Ellen Johnson Sirleaf ayaa BBCda u sheegtay in dumarka Afrika ay dhumiyeen halyay, hogaamiye iyo qof ololeeya.
Madaxweynaha Tanzania Jakaya kikwete ayaa ku tilmaamay Wangari Maathaiqof aragti dheer iyo geesinimo leh
BBCda ayaa heshay fariimo badan oo ka yimid dhagaystayaasha Afrika in qaarada oo dhan ay ka dhimatay.
Xoghayaha gudiga Norway ee bilada Nobelka ayaa ku tilmaamay Wangari qof isku dara siyaasada iyo arrimaha deegaanka shaqadooda si gaar ah.